Nyocha ndị ọgbọ - AfricaArXiv
Nyochaa ndị ọgbọ bụ ntule nke oru site na otu ndi mmadu ma obu ndi ozo nwere ikike dika ya bu ndi n’ileputa ihe ahu.ndị ọgbọ). Ọ na-arụ ọrụ dị ka ụdị njikwa onwe onye site n'aka ndị ọrụ ruru eru nke ọrụ dị mkpa ubi. A na-eji ụzọ nyocha ndị ọgbọ na-ejigide ụkpụrụ dị mma, melite arụmọrụ, ma nye nzere. Na agụmakwụkwọ, nyocha ọgụgụ akwụkwọ a na-ejikarị ekpebi ihe akwụkwọ agụmakwụkwọO kwesịrị ekwesị maka mbipụta.
Site na Wikipedia, en.wikipedia.org/wiki/Peer_review
Preprints na nyocha ndị ọgbọ
Ihe odide preprint bụ ụdị onye edemede nke edemede ma na-enyefekarị ya na akwụkwọ akụkọ maka nyocha ndị ọgbọ. Na ọdịnala, ngalaba nchịkọta akụkọ nke akwụkwọ akụkọ ahụ bụ ọrụ maka ịhazi usoro nyocha ahụ.
Usoro nyocha nke ndị ọgbọ dị iche n'etiti amaghị aha ma ọ bụ 'kpuru ìsì', onye isi abụọ na onye ọhụụ mepere emepe ma dabere ma onye edemede na onye nyocha ọ maara banyere ibe ha ma ọ bụ na ọ bụrụ na akụkọ nyocha ahụ dị n'ihu ọha ma ọ bụ naanị na nchịkọta akụkọ nke otu akwụkwọ akụkọ na onye edemede.
Taa, ụdị nyocha ndị ọgbọ dị iche iche dị n'ụfọdụ n'ime ndị anyị na-egosi ebe a. Offọdụ n'ime ndị mmekọ anyị nye ọrụ nke gunyere ma ọ bụ nye ihe nlere dijitalụ maka nkọwa ederede na nyocha ndị ọgbọ nke ihe odide gị.
Iji nweta ma ọ bụ nye nzaghachi maka ihe omume e mere n’usoro nke AfricanArXiv anyị na-atụ aro ndị a:
Community nyochaa edemede na Nyocha
Ebumnuche PREreview bụ iweta ọtụtụ ihe dị iche iche na nyocha nke ndị nkuzi site na ịkwado na inye ike nke ndị na-eme nchọpụta, ọkachasị ndị nọ na mmalite ọrụ ha (ECRs) iji nyochaa usoro mbido.
Na PREreview anyị kwenyere na e kwesịrị ikwe ka ndị nchọpụta niile nyere ndị ọzọ aka site na ịtụle ọrụ ndị ọgbọ ha, ọ bụrụhaala na ọ mere arụ ọrụ.
Iji zụọ ndị na-eme nchọpụta iji nye azịza na-arụ ọrụ
N'ụzọ dị iche, ebe nyocha ndị ọgbọ bụ akụkụ dị mkpa maka mgbasa nke sayensị, ọ bụ ndị ọkà mmụta sayensị ole na ole na-enweta ọzụzụ ọ bụla.
GỤKWUO na ọdịnaya.prereview.org/about/
Nyefee ihe odide mbido akwụkwọ gị Ọgbọ ndị mmadụIn
Community Peer in… (PCI) bụ nzukọ na-akwụghị ụgwọ sayensị na-esite na France nke na-ezube ịmepụta obodo nke ndị nyocha na-enyocha ma na-atụ aro, maka enweghị mbipụta akwụkwọ na-ebipụtaghị n'efu.
PCI na - enye usoro nkwenye n'efu maka nkwadebe sayensị (na isiokwu ndị edepụtara) dabere na nyocha ndị ọgbọ.
Nyefere na akwụkwọ mpịakọta ahụ gaa na PCI maka nyocha (howto).
Ndị na - emeghachi PCI nwere ya Daysbọchị 20 iji kpebie na akwadebe gị.
Ozugbo emere onye na-akwado ya ọrụ gị, a na-enyocha ike iwepụta akwụkwọ gị opekata mpe nyocha abụọ.
Ị nabatara onye na-enyocha ya na onye na-ekwu ya iji kwadebe Jehova ndeghari edemede a.
PCI na-enye ndebiri nye onye ode akwukwo iji dozie akara ngosi nke ikpehe ya na akara ngosi PCI na ntinye nke nkwanye aka.
A na-ebipụta nkwanye ahụ na akụkọ nyocha na weebụsaịtị weebụ. Thedị pdf nke nkwanye PCI na akụkọ nyocha nwere ike idebe akwụkwọ site na ihe mgbakwunye.
Ntinye PCI nke plọd ahụ na-enweta a Crossref DOI nke ejikọrọ na ndekọ ntanetị n'ịntanetị.
Melite ndekọ nkwalite akụ gị n'elu ikpo okwu AfricanArXiv gụnyere nkwado PCI.
A ka akwadoro itinye akwụkwọ ndozi ahụ akwadoro ka ọdee akwụkwọ. GỤKWUO na peercommunityin.org/pci-friendly-journals.
Deba aha akwukwo edeputara na Nkwado.is
Ngwa nchọgharị na mpempe akwụkwọ ntanetị Nkwado.is na-enyere ndetu-ọkwa nkwupụta okwu ma ọ bụ nkatọ n'elu akụkọ, blọọgụ, isiokwu sayensị, akwụkwọ, usoro ọrụ, atụmatụ vootu, iwu na ọtụtụ ndị ọzọ.
Mgbe ụfọdụ a na-akpọ ya 'nyochaa ndị ọgbọ nke obodo' ị nwere ike ịgụ ma kọwaa ihe odide ndị a nabatara na usoro ọ bụla nke nyiwe anyị na-eji Hypothes.is - ma ọ bụ maka onwe gị ma ọ bụ mee ka nkọwa gị nyere ndị ọrụ Hypothes.is ndị ọzọ.
Iri OSF na nsonye AfricArXiv / OSF na mmemme nkwalite obodo ndị ọzọ jikọtara ọnụ na Nkwado.is iji mee ka ngosipụta ọhaneze na nkọwapụta nke ọha mmadụ gụọ na PDF na onye ọ bụla.
GỤKWUO na enyemaka.osf.io/…Annotate-a-Preprint na web.hypothes.is/research/.
Legharia edemede ọ bụla na ScienceOpen
ScienceOpen bu uzo ihe omumu nke nwere ihe omuma ndi okacha amara iji me ka nyocha ha n’obodo mepee, metuta ya ma nata otuto maka ya
Nye ma ọ bụ nweta nyocha nke ndị ọgbọ na nke ọ bụla karịa nde 60 nde ihe nyocha na ndekọ ntanetị na nyiwe ScienceOpen. Gụkwuo na banyere.scienceopen.com/peer-review-guidelines/.
Site na Akwụkwọ AfricaArXiv nnakọta na ScienceOpen ọ ga - ekwe omume maka ndị edemede rịọ maka ndị nchọpụta ndị ọzọ ka ha nye ọkwa nha anya nyocha na ihe odide mbido akwụkwọ akụkọ በቀጥታ na ScienceOpen. Gụkwuo na sayensịopen.com/collection/SOPreprints
Ethkpụrụ gbasara usoro nyocha nke ndị ọgbọ
Iji hụ na iguzosi ike n'ezi ihe nke akwụkwọ ọgụgụ na iji mee ka nyocha na-agbanwe agbanwe, na-agbanwe agbanwe, n'oge, anyị na-akwado ịgbaso ụkpụrụ nduzi COPE maka ndị na-enyocha ndị ọgbọ, nke a ga-enweta na atejadeethics.org/files/Ethical_Guidelines_For_Peer_Reviewers.pdf
Inata nkwuputa nke ọha na eze maka ọrụ inyocha nyocha
bulite akụkọ nyocha na AfricanArXiv ka edepụtara ndị ọrụ nyochachara nyocha a.
tinye DOI nke ederede edepụtara dị ka akwụkwọ
Gbaa mbọ hụ na ndị na-ede akwụkwọ na ndị na-ede akwụkwọ kwetara
denye aha na nyocha na Akwụkwọ.
N'ihe banyere ajụjụ ọ bụla gbasara nhọrọ nyocha ndị ọgbọ na - eburu maka ịde akwụkwọ mbido, kpọtụrụ anyị na ozi@africarxiv.org.
COPE Council. Ntụziaka ụkpụrụ maka ndị na-enyocha ndị ọgbọ. Septemba 2017. | bazaara.org.ego
Tennant, JP, Ross-Hellauer, T. Ike na nghọta anyị gbasara nyocha ndị ọgbọ. Res Mmekọrịta Ndị Ọgbọ Rev5, 6 (2020). doi.org/10.1186/s41073-020-00092